प्रदेश १ मा को–को बन्दैछन् मन्त्री ? गृह आफैंसँग राख्ने मुख्यमन्त्रीको इच्छा::Pathivara News
प्रदेश १ मा को–को बन्दैछन् मन्त्री ? गृह आफैंसँग राख्ने मुख्यमन्त्रीको इच्छा
विराटनगर । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सपथग्रहणसँगै सानो आकारको मन्त्रिपरिषद गठनको तयारी गरेका छन् । मुख्यमन्त्री राईले दिउँसो ३ बजे सपथ लिनेछन् । लगतै मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने एमाले र माओवादीको तयारी छ ।
तर, गठबन्धनमा सहभागी माओवादी केन्द्रले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको दाबी नछाडेकाले पहिलो चरणमा सहभागी हुने मन्त्रीको नाम टुंगो लागेको छैन । मुख्यमन्त्री राईले भने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय आफैंसँग राख्ने इच्छा व्यक्त गरेका छन् । माओवादीले आन्तरिक मामिला मन्त्रालय नपाए अर्थमा दाबी गरेको छ । राईले गठबन्धनभित्र छलफलपछि पार्टीबाट मन्त्री बनाउने व्यक्तिको सन्दर्भमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग परामर्श गर्दैछन् ।
स्रोतका अनुसार एमालेबाट हिक्मत कार्की र माओवादीबाट इन्द्र आङ्बो पहिलो चरणमा मन्त्री बन्दैछन् । गठबन्धनमा कुरा मिलेको खण्डमा एमालेबाट पहिलो चरणमै जगदिश कुसियत र जीवन घिमिरे पनि मन्त्री बन्दैछन् । मन्त्रिपरिषद गठनका लागि गठबन्धन र पार्टीभित्र परामर्श भइरहेको मुख्यमन्त्री राईले बताए ।